डुबायो प्रेमले : लभ, से’क्स र धो’का ! – Life Nepali
डुबायो प्रेमले : लभ, से’क्स र धो’का !
नुवाकोटकी मनमाया तामाङ माइत बसेको लामै समय भएको थियो। फुर्सदिली उनी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय थिइन्। सञ्जालमा जोडिएका साथीको मध्यमबाट उनीलाई नयाँ व्यक्तिले साथी बन्न प्रस्ताव ग-यो। उनले साथी बन्न आएको प्रस्ताव स्वीकार गरिन्। त्यसपछि हल्काफुल्का कुराकानी हुन थाल्यो। यसको सात महिनापछि उनीहरु अझ नजिक बने। नजिक बन्नका लागि सजिलो कारण बन्यो, दुवै जनाको समान पीडा। उदयपुरका भीम सुबेदीले आफ्नी पत्नी बितेको पाँच वर्ष भइसकेको बताएपछि श्रीमानबाट अलग रहेकी मनमायाको मन प’ग्लियो। त्यस पछि नम्बर साटासाट गरेर उनीहरु फोनमा रम्न लागे। *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
मनमायाले यो कुरा भीम काठमाडौँ फर्किएपछि उनको म्यासेन्जर हेरेर थाहा पाएकी थिइन्। भीमलाई वास्तविकता पनि सोधिन् तर उनले पहिलेका कुरा भन्दै हाँसेर टा’रिदिए। त्यसपछि भने मनमायाको मनमा चिसो पस्यो। आफैँले घरबाट सबै समान लिएर आएर सल्लाहले बसेको प्रेमीलाई शं’काको नजरले हेरी हाल्न पनि उनले सकिनन् तर मन त हो कहाँ मान्छ र ? उनले भीमका बारेमा चियो गर्न थालिन्।
यसपछि मनमायाले भीमको क’र्तुतको लाइनै फेला पारिन्। केटीहरुसँग डुल्ने बानी भएका भीम एकै ठाउँमा टि’क्न पो कसरी सक्थे ! भीमले पहिला बोलेका कुरा एकपछि अर्काे झू’ट परिणत हुँदैगयो। भीमले मनमायाको विश्वास जित्न साथीभाइलाई समेत कोठामा ल्याए। अहिले उनका साथीभाइ पनि अचम्म परेको मनमाया बताउँछिन्। इमान्दार छवि बनाएका भीमको असली रुप मनमायाको अघि उदाङ्ग हुन थाल्यो, उनी त्यति अलमलमा पर्न थालिन्। उनले भीमसँग छुट्टिने कोसिस पनि गरिन् तर सकिनन्। अन्ततः भीमले मनमायालाई थाहा नै नदिई सु’टुक्क देश छाडे। पछि मनमायाले उनलाई फोन स’म्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि भीम स’म्पर्कमा आउन चाहेनन्। आए पनि मनलाग्दी बोल्न थाले।
जता गयो त्यतै केटी साथी बनाउने र अनेक कहानी सुनाएर मन जित्न सिपालु भीमले धेरैलाई एक–दुई रात राखेर छाडेको मनमायाले पत्ता लगाइन्यता मनमायाका पूर्वपतिसँग एक सन्तान पनि छन्। भीमले धो’का दिएपछि उनले पूर्वपतिसँग आफ्नो तिक्ततापूर्ण स’म्बन्धलाई सु’मधुर बनाउने प्रयास गरे पनि अ’सफल भइन्। यसपछि उनी भीमको घर खोज्दै उदयपुर पुग्दा उनले अर्को सरप्राइज फेला पारिन्, न त भीमले पहिले बिहे गरेका रहेछन् न त उनी विधुर रहेछन् ! अविवाहित छोराको बुहारीका रुपमा अचानक मनमाया हक खोज्दै उदयपुर पुगेपछि भीमको परिवारले स्वीकार गर्न चाहेन। पछिल्लो समय मनमायाको नियति भोग्ने युवतीको संख्या बढिरहेको छ। कतिपय मिडियामा आउँछन्, कति आउँदैनन्।
सामाजिक सञ्जालमा भएका मीठा पिरतीका कुराकानीबाट मख्ख भएर घरै छाडेर हिँड्ने यु’वतीको संख्या बढिरहेको छ। सञ्जालको भर पर्दा बर्दियाकी शर्मिलाले पनि यस्तै अवस्था भोग्नु परेको छ। १७ वर्षकी शर्मिला (नाम परिवर्तन) कविता लेख्न हुरुक्क हुन्थिन्। फेसबुकका विभिन्न साहित्यिक समूहमा उनी निकै सक्रिय हुन्थिन्। कविता लेख्नु र फेसबुकमा पोस्ट्याउनु उनको दैनिकी थियो। यसै क्रममा झापाका अर्का एक साहित्य अनुरागी २३ वर्षीय विनोद (नाम परिवर्तन)सँग उनी जोडिइन्। दुवैको रुचि साहित्य भएकाले नजिकिन समय लागेन। तीन चार महिनाभित्रै शर्मिला विनोदलाई भेट्न काठमाडौं आइन्। विनोदसँग केही समय सँगै बसेर पुनः बर्दिया फर्किएकी शर्मिलासँग विनोद टाढिदै गए। अन्ततः दुवैको बाटो अलग भयो।
यस्तै साउदी अरबमा बसेका नुवाकोटका २४ वर्षे कुमारले सामाजिक सञ्जालमा एक भियतनामकी युवतीसँग सम्बन्ध बढाए। परिवारले यो प्रकरण थाहा पाएपछि उनलाई नेपाल झिकाए। चाँडै फर्किएर आउँछु भनेर भियतनामी युवतीसँग बिदाइको हात हल्लाएका कुमार पुनः फर्किन भने सकेनन्। त्यसपछि उनी घरपरिवारसँग यति चिढिए कि परिवारको शेखी झार्नकै लागि सामाजिक सञ्जालमा रहेकी अर्की एक विवाहित महिलालाई भा’ग्न नै मनाए । हाम्रो समाजमा पछिल्लो समय असरल्ल देखिएका घ’टनाका प्रतिनिधि पात्र हुन् यी।
Previous फेसबुकमा न’क्कली ‘id’ बनाई सुन्दर तस्बिर रा’खेर, रा’म्रो केटासँग Love पारेपछि यु’वती फ’न्दामा”
Next अर्कैको श्रीमतीलाई भु’डी बो’काएपछी भयो ल’फडा” (हेर्नुहोस् भिडियोमा)